#Muller:Bayern Ayaa Dareemeysa Cadaadis dhanka horyaalka ah - Get Latest News From Horn of Africa
By WARIYAHA CAALAMKA On Apr 21, 2019 Last updated Apr 21, 2019
Cadaadis ayaa jira dhanka Bundesliga, sida laga soo xigtay xiddiga Bayern Munich Thomas Muller ka dib kulankii sabtida ee Werder Bremen ay la yeesheen.Thomas Muller ayaa qiray in Bayern Munich ay dareemeyso cadaadis dhanka tartanka ah ee Borussia Dortmund ee horyaalka Bundesliga.
Kooxda heysata horyaalka Jarmalka Bayern ayaa afar dhibcood oo nadiif ah hogaanka ku qabatey ka dib markii ay 1-0 kaga badiyeen Werder Bremen.
Niklas Sule ayaa goolka guusha dhaliyay daqiiqadii 75aad ee Garoonka Allianz Arena, halkaasoo Bayern Munich ay ka faa’ideysatay fursada qaliga ah ee soo martey, inkasto kooxda ay xafiiltamaan ee Dortmund aysan ciyaarey sabtidii oo ay ciyaari doonto Maanta oo Axada.
Muller ayaa sheegay in cadaadiska wuxuu ka jira horyalka dhexdiisa, inkastoo ay Bayern isha ku hayso markii toddobaad oo xiriir ah oo ay horyaalka hanato.
“Cadaadiskan ayaa jira ruunti, waxaan dareemeynaa sida aan dhamaanteen u dooneyno inaan ku guuleysano horyaalka Bundesliga” ayuu Muller u sheegay shabakadda bundesliga.com.
“Kadib wakhti oo gabagabo sii ah, waa inaan dhibco badan helnaa, taas oo aan sameynay intii aan awoodney, inkasta oo natiijada dhibcaha nalagu dhow yahay”
Bayern – marka laga soo tago 10ka kulan ee aan laga badin horyaalka Bundesliga – waxaa uu harey afar kulan oo xasaasi ah.
Dortmund ayaa usoo dhawatey Bayern Munich iyadoo guul ay ka gaartay Freiburg.